CashBack - ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပမာဏ၏အစိတ်အပိုင်း recover
အစ » ဘ‌‌လော့ခ် » သင်ခန်းစာများ » CashBack - ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပမာဏ၏အစိတ်အပိုင်း recover
နောက်ထပ်စျေးဝယ်အခမဲ့el.parduotuvėse၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်ကယ်ဖို့ Cashback ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဝန်ဆောင်မှုများသောအားဖြင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအများအပြားကကမ်းလှမ်းပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာများနှင့်လျင်မြန်စွာလည်ပတ်နေသည့်လူကြိုက်အများဆုံးစုံတွဲ၏ရွေးချယ်ရေးကြိုးစားနေသည်။
လက်ထောက် cashback ပေးခြင်း:
ဒီတစ်ခု cashback စနစ်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံခြားရှိပါတယ် အီး။ စျေးဆိုင်စာကြည့်တိုက်။ သငျသညျမသာနိုင်ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Recover Aliexpress, Gearbest, Geekbuying, Banggood ar TomTop စတိုးဆိုင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းတခြားလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက်, စျေးဆိုင်။ မှတ်ပုံတင်ထား ဒီ link ကနေတစ်ဆင့် $5ရရှိခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုကို client ကိုဆုကြေးငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရှိသမျှတို့, မည်မျှ Facebook ကိုရဲ့ login အဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းမနာသီချင်းဆိုကြလော့။ စနစ်ကနေနိမ့်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ကြေးပမာဏကို - $ 5.99 ။ လက်ထောက်ပေးခြင်း ဒါဟာစတိုးဆိုင်ကိုရှေးခယျြ atktyvuoti cashback'ąသာခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအဆင်ပြေ browser ကို extension ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း (တဦးတည်းကသူတို့ရဲ့ system ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လျှင်) သင့်လျော်သောထုတ်ကုန်ကူပွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်။
Browser ကိုတိုးချဲ့မှု (applet)
ဒီစနစ်ရုရှားစျေးကွက်စျေးဝယ်စာရင်းကအာရုံစိုက်တစ်အများကြီးသေးငယ်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုက်ဆံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည် Recover Aliexpress, Gearbest, Geekbuying, Banggood, Adidas, Reebok, Nikon ကင်မရာနှင့်အခြား e-mail, ။ စတိုးဆိုင်များ။ များသောအားဖြင့်သင်ကရှေးနုရာခိုင်နှုန်းကိုရှာတှေ့နိုငျ ဒီမှာသို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ကမ်းလှမ်းမှုရှာလို့ရပါတယ် MEPS စာမကျြနှာသို့ဖြစ်လျှင်သင်အမြဲ ပို. ပင်ကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပြုချက်များစာရင်းအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်ပမာဏ၏% ပြန်လည်နာလန်ထူ 90 အထိဖုံးလွှမ်းကြ၏။ သငျသညျမှတ်ပုံတင်ပြီးကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် Gearbest ar Aliexpress စတိုးဆိုင်များ, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် မှတ်ပုံတင်သင်ခန်းစာများ.
EPN ထီ (သင် 1ct အကောင့်ရှိရမည်)
ဘယ်လို Mep မ:
အဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှု MEPS cashback "Up ကို Sign" website နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
"မှတ်ပုံတင်မယ်" ပေါ်တွင်သင်၏el.pašoလိပ်စာကိုရိုက်ထည့်တဲ့ password ကိုဖန်တီးနှစ်ကြိမ်2ကဝင်, နှစ်ဦးစလုံးမရွေးရင်ပြင်အတွင်းရှိကျူးကျော်ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်စွန့်ခွာခြင်းနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင်ကအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိနှင့် "Activate" ကိုနှိပ်ပါ
ကိုသွားပါ ဘရောက်ဇာကို extension ကို site ကို။ "တစ်ဘရောက်ဇာကိုရွေးချယ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ
သင့် browser ကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျ non-Chrome ဘရောက်ဇာကိုသုံးပါလျှင် / recording ကိုလမ်းညွှန်အထက်အောက်တွင်သင်, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သင်က Chrome browser ကိုအသုံးပြုလျှင်, ထိုအမှတ်အသားနှငျ့ "Add extension ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ထောင့် extension ကိုအိုင်ကွန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် "တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်" ပေါ်တွင်ပြုလုပ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကိုယခင်ကတီထွင်ထည့်သွင်းပါ။ အဆိုပါ "တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်" ကိုနှိပ်ပါ
အွန်လိုင်းဆိုင်ကပံ့ပိုးထားတဲ့န်ဆောင်မှုကိုသွားပါ။ တိုးချဲ့မှုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "Cashback Activate ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျစျေးဝယ်စတင်နိုင်ပါသည်။ (ဤခြေလှမ်းတစ်ခုစီကိုစျေးဝယ်မတိုင်မီထပ်ခါတလဲလဲရပါမည်)
ထုတ်ကုန်၏ခွင့်ပြုချက်အပျေါနှင့်ငွေကိုတပ်လက်ခံရရှိမှတ်သားသင့်အကောင့်စာမျက်နှာကိုသွားသင့်တယ် 2.သင်တို့အပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မည် 1. ( အကယ်. ပိုက်ဆံ MEPS စီမံခန့်ခွဲသူကိုမေးရန် "မလာပါဘူး") ။ အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 3.
"ပိုက်ဆံအိတ် Add" ဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင်သည်သင်၏စုဆောင်းငွေကိုလွှဲပြောင်းနှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုဝင်, ခလုတ်ကိုနှိပ် "အတည်ပြုရန်" / "Add" ကိုလိုခငျြရှိရာတည်နေရာကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်သင်မေးလ်ထဲမှာအခြားစာတစ်စောင်အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ပါမည်။
, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုငွေလွှဲပမာဏရိုက်ထည့်ပါ, အကောင့်ကို select နှင့် "အထဲကငွေပေးချေ" ပေါ်တွင် click လုပ်ရန်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ငွေပမာဏ.
အသုံးပြုသူ Rating: 4.44 (9 ratings)
ကုန်စည်များ၏စာရင်းကြိုက်တယ်ဖို့ Addedကြိုက်တယ်ပစ္စည်းစာရင်းထဲကဖယ်ထုတ်လိုက် 0
Aliexpress Lithuanian ထဲတွင် LT လမ်းညွှန်။ Browsing Aliexpress Lithuanian ထဲတွင်
ကုန်စည်များ၏စာရင်းကြိုက်တယ်ဖို့ Addedကြိုက်တယ်ပစ္စည်းစာရင်းထဲကဖယ်ထုတ်လိုက် 5
Aliexpress ru လမ်းညွှန်။ ရုရှားဘာသာစကား settings ကို။ Алиэкспресснарусскомязыке
သင့်ရဲ့ comment ကိုစွန့်ခွာ မှတ်ချက် Cancel
လျှပ်စစ်စက်ဘီး (သာလျှပ်စစ်မီး 20km ဖုံးလွှမ်း 30km / ဇ, အကွာအဝေး) ခေါက် Samebike 35LVXD70
လျှပ်စစ် Scooter (365km / ဇနှင့် 25km မှအကွာအဝေး) မှတဆင့် Xiaomi က M45
Huawei P10 Plus အားဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ)